रगत पनि ६-७ दिन जान्छ। | Bishow Nath Kharel
म २५ वर्षीया गृहणी हुँ। मेरा दुई सन्तान छन्। मेरो महिनावारी नियमित छ, तर विगत ५ महिनादेखि महिनावारीमा रक्तश्राव बढी हुन्छ। दैनिक ५-६ वटा प्याड फेर्नुपर्छ। रगत पनि ६-७ दिन जान्छ। मैले के गर्ने होला ?
महिना-महिना दिनको अन्तरमा हुने रक्तश्राव नै महिनावारी हो र सामान्यतः यो २१ दिनदेखि ३५ दिनको अन्तरमा ३ देखि ५ दिन वा ७ दिनसम्म हुन्छ। पहिलो दिन कम रगत गए पनि दोस्रो-तेस्रो दिन ८० मिलिग्रामसम्म रगत जान सक्छ अर्थात् ३-४ वटा प्याड फेर्नुपर्ने हुन सक्छ। उक्त अवधिभन्दा बढी दिन वा ८० मिलिग्रामभन्दा बढी रगत गए वा दुवै भएको अवस्थालाई मेनोरेजिया भनिन्छ। यो अवस्थामा रगत धेरै जाने भएकाले उपचार आवश्यक हुन्छ। मेनोरेजियाका धेरै कारण भएकाले पत्ता लगाउन विभिन्न परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। धेरैवटा अवस्थामा औषधिको सेवनले नै यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ। कुनै-कुनै अवस्था तथा औषधिले सम्भव नभएको खण्डमा पाठेघरको शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कसै-कसैलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधन खानेचक्कीले पनि फाइदा गर्छ।
ब्रा, पेन्टी र अन्डरवेयर
महिला तथा पुरुषका भित्री वस्त्र एउटै स्थानमा किनमेल गर्न सकिने ठाउँ काठमाडौंमा विरलै मात्र छन्। महिलाले प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका ब्रा, पेन्टी तथा पुरुषहरूले प्रयोग गर्ने अन्डरवेयर, सेन्डो, ट्राउजर तथा टि-सर्टहरू न्यूरोडको पिपुल्स प्लाजास्थित न्यू केशव ट्रेडर्सले एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउँछ। उक्त टे्रडर्समा भारतको जक्की ब्रान्डका अन्तर्वस्त्रहरू खरिद गर्न सकिन्छ। यो जक्की ब्रान्डको आधिकारिक शोरुम नै हो। सञ्चालक गोकुल शर्माका अनुसार महिलाले प्रयोग गर्ने ब्रा-पेन्टीका लागि ६ सय ९५ देखि १ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ भने पुरुषहरूको अन्डरवेयर २ सय ९५ देखि ६ सय ९५ रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध हुन्छ।
हरियाली जंगलभित्र राताम्मे फुल्ने लालीगुराँस चम्पादेवीको चिनारी हो। चम्पादेवी डाँडामा पुगेपछि आँखैअघि देखिने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको दृश्यले सबैको मन फुरुङ्ग बनाउँछ। राजधानीको व्यस्त जीवन, कोलाहल र प्रदूषित वातावरणबाट केही समयका लागि उन्मुक्ति पाउन चम्पादेवी सबैको रोजाइमा पर्छ। डाँडामा उभिएर काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा मकवानपुरका रमाइला दृश्य हेर्दा मनै आनन्दित हुन्छ।
चम्पादेवीको दर्शन गरेर रमाइलो डाँडामा घुमफिर गर्दा पर्यटकलाई समय बितेको पत्तो हुँदैन। बल्खु-दक्षिणकाली सडकमा ५ किलोमिटर गाडीमा गुडेर चाल्नाखेल पुगेपछि चम्पादेवी पदयात्रा प्रारम्भ हुन्छ। छिटो हिंड्दा तीन घण्टा नत्र चार घण्टाको पदयात्रापछि डाँडामा पुग्न सकिन्छ। फागुन-चैत महिनातिर चम्पादेवीमा ढकमक्क गुराँस फुल्छ भने वैशाख १ गतेका दिन मन्दिरमा धुमधाम मेला लाग्छ।
समुद्री सतहबाट २ हजार २ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको चम्मादेवीबाट कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा सगरमाथा, लाक्पादोर्जे तथा गौरीशंकर हिमश्रृखंलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। चम्पादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गरे शान्ति मिल्ने र चिताएको कुरा पूरा हुने भएकाले धार्मिक पर्यटकहरू पनि त्यहाँ पुग्छन्। पदयात्राका क्रममा कालिज, मैना, काँडेभ्याकुरजस्ता चराका साथै अन्य जनावरहरू अवलोकन गर्न पाइन्छ। चाल्नाखेल गाविसअन्तर्गतको बोसन गाउँको थाप्लोमा रहेको चम्पादेवी कीर्तिपुर नगरपालिका र शेषनारायण गाविसको संगमस्थल हो।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका कब्जामा लिनुपूर्व कीर्तिपुर हात पार्न चित्लाङ हुँदै यही स्थानमा बसेर योजना बनाएको र कीर्तिपुर आक्रमण गर्न डाँडामा बंकर बनाएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यहाँ होम स्टेको सुविधा लिन सकिन्छ। दुई दिन एकरातको प्याकेज चम्पादेवी पदयात्राका लागि पर्याप्त हुनसक्छ। ऐतिहासिक स्थल एवं बहुमूल्य जडीबुटीहरूको अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने हो भने प्याकेजमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।
नेटमै प्रेम, नेटमै विह
एउटा जमाना थियो, भेटेपछि माया लाग्छ नभेटेकै जाती भन्ने गीत गाइन्थ्यो। कर्णदासले पनि त्यही विषयमा एउटा गीत गाए, भेटिएर छुट्नुभन्दा नभेटिएकै जाती हुन्थ्यो। भेटको कति महत्त्व हुन्थ्यो भन्ने कुरा नेपाली गीतहरूमा यसरी दसाईएका कुरा हेरे थाहा हुन्छ। बल्ल-बल्ल भेट भा’को दिन, सङ्लो पानी धमिलो मन किन ? धेरै पछि भेट भो दर्शन नमस्ते जस्ता धैरै गीतले भेटको बखान गरेका छन्।